सर्वोच्च अदालतले ढुंगेलको पक्षमा आदेश दिएपछि देशभर तरंग, कसरी उल्टियाे फैसला ? — Imandarmedia.com
सर्वोच्च अदालतले ढुंगेलको पक्षमा आदेश दिएपछि देशभर तरंग, कसरी उल्टियाे फैसला ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमुद ढुंगेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौं फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत, ललितपुरले ढुंगेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । शुक्रबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंकै फैसलालाई सदर गरिदिएको हो ।
अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिने ढुंगेलले अन्य अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्यैदेखि श्रेष्ठलाई चिनेको बताउँदै घटनाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । अनुसन्धान अधिकृतबीच रहेको टकरावका कारण उनलाई शिकार बनाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र चर्चा हुने गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेहरुको प्राय: एउटै तर्क छ, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।’
सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले बेलायत र भारत आदि देशको उदाहरण दिन्छन् । सन् २०११ मा ‘फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनीहरु भन्छन्, कानुन बनाएर नरोक्दासम्म संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छन् ।’
उनीहरुले नेपालको संविधानले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेकाले भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमको बचाउ गरेका छन् । बिहीबार त्यही तर्क गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोके ।
सरकारी पक्ष र रिट निवेदकबीच एउटा मात्र मत नमिलेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले २०७२ को संविधान संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेर बनेको हो । तर, संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छौं, त्यति संसदीय व्यवस्था मानेका हौं । जति लेखिएको छैन, त्यति नमानेका हौं भन्नुहुन्छ । तपाईले संविधानमा लेखिएको भए मान्नुपर्थ्यो, नलेखिएको हुनाले (संसद विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने) मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।’
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हो भनेपछि जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्था लेखेको संविधान भएको, तर संसद व्यवस्थाका विभिन्न मूल्य मान्यता मानेको उदाहरण छ ?’ उनले यसलाई अझै प्रष्ट पार्न खोजे, ‘जहाँ हाम्रो जस्तै संविधानमा विघटनको अधिकार नराखेको, तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको उदारहरण छ कि छैन ?
जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन भनेर नभनेको बताए । तर प्रधानन्यायाधीशले उनलाई रोक्दै प्रष्ट्याए, ‘तपाईले (संविधानको धारा) ७६ भित्रबाट बेग्लै ब्याख्या गर्नुहोला । तपाईले धारा ७४ भनेका अवस्थामा मैले यो प्रश्न गरेको हो ।’
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।